I-China i-250ml ekumgangatho ophezulu ocacileyo kunye ne-Amber Glass Diffuser Bottle yefektri kunye nabaxhasi | IHoyer
Umgangatho webhotile yeGlasi engu-250ml kunye ne-Amber Glass Diffuser
Ngokuseta kwethu i-livumba levumba elimnandi, unokufumana ukuqaqanjelwa kunye nokuphiliswa, ngakumbi ukukhulula uxinzelelo lomsebenzi wemihla ngemihla.
Olu lukhetho oluhle lokwamkela wonke umntu, kakhulu xa undwendwele. Bayonwabela indawo yokuphumla neyonwabisayo.
Umthamo: 250ml / 8.3 oz
Ukuphakama: I-130mm / 5.1 intshi
Ububanzi: I-66mm / 2.6 intshi
Umbala: Ukucaca kunye nee amber, ukupeyinta komnye umbala kuyamkeleka
Kukho iiseti zeebhotile ezili-9 kweli phepha, unokukhetha nabani na omthandayo, ukuba ufuna isikhokelo esongezelelweyo, nceda unxibelelane nathi ngokukhululekileyo. Njengesisombululo esifanelekileyo, i-reed diffuser inokugcina iindawo zakho zithambekile ngeoyile yakho oyithandayo, enokubuyisela uxinzelelo olukhulu.
Beka ezinye izinti kwi-oyile yebhotile, inokubonelela ngokukhuselekileyo komoya onuka umoya. Yonwabela igumbi lakho nangaliphi na ixesha.
Ukuqhubeka kokuguquguquka kwamandla emithi: izinti zentsimbi yeyona ndlela ifanelekileyo yokufumana ioyile eyimfuneko kunye nokusasaza amakha emoyeni. Iglasi ye-amber iyakwazi ukuthoba ioyile efanelekileyo kunye nokusasaza ivumba emoyeni. Ibhotile ye-amber emnyama inokugcina ioyile eyimfuneko kude nemisebe ye-ultraviolet kwaye inokusebenzisa ixesha elide.
Ukuthenga okungenamngcipheko: Nayo nayiphi na imiba nceda uqiniseke ukuba uqhagamshelana nathi, siya kwenza konke okusemandleni ukulungisa impazamo.
Ubungakanani Umthamo: 250ml Height 13cmububanzi 6.6cm umbala ocacileyo kunye nembala.
Umthamo: Ukuphakama kubude obuzi-125ml
Umthamo: I-150ml Height 9cm
Ububanzi: 6cm ukubekwa kwesikwere
Umthamo: 8,3 oz Ukuphakama: I-5.1 intshiUbubanzi: 2,6 intshi(Le bhotile inentamo ebanzi nexineneyo, ngombala ocacileyo kunye nembala)
Ivolumu: I-4.1 oz Height 4.1 intshi
Ububanzi: 2.2 intshi
(Le bhotile inentamo ebanzi nexineneyo, ngombala ocacileyo kunye nembala)
Umthamo: I-5 oz Height 3.5 intshi
Ububanzi: 2,4 intshi
Umbala Icacile kunye nee amber Ukuprinta okanye ukwenza umbala usebenze wamkelekile
Edlulileyo: Ibhotile yeglasi engu-100ml ecacileyo yeGlass Diffuser
Okulandelayo: Iibhotile ezingama-200ml zokuThengisa okuShushu oMdaka oCacileyo kwiGlasi yeGlasi
I-200ml yeNtengiso eshushu yeRound Shape ecacileyo yeGlasi ...